ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ neurobiology ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်တွေ့ရှိချက်အသစ်များ (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
အဆိုပါရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ neurobiology ခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ (2008)
ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008 အောက်တိုဘာလ 12; 363(1507): 3181-3189 ။
2008 ဇူလိုင်လ 18 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0100
မာ့ခ် N ကို Potenza1,2,*
လောင်းကစားနေတဲ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့အပန်းဖြေအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5% လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ လောင်းကစားများ၏အများဆုံးပြင်းထန်ပုံစံ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ PG နှစျယောကျအခြား Non-အပြန်အလှန်သီးသန့် Conceptual တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive spectrum ကိုရောဂါနှင့် '' အမူအကျင့် '' စွဲလမ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ PG ၏ဆုံးသင့်လျော်သောစိတ်ကူးအရေးကြီးသောသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒေတာကို PG နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအကြားတည်ရှိထက် PG နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံရေးမျိုးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤစာတမ်း, PG ၏ neurobiology အပေါ်ဒေတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ့်အမူအကျင့်စွဲအဖြစ်က၎င်း၏စိတ်ကူးကိုစဉ်းစားတစ်ခုနောက်ခံ Construction အဖြစ် Impulse ဆွေးနွေးရန်နှင့်ကိုကင်းမှီခိုသူများအတွက်နှိုင်းယှဉ်ပါက PG အတွက်တဏှာပြည်နယ်များရဲ့အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသစ်ကိုဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
keywords: လောင်းကစားဝိုင်း, စွဲလမ်း, Impulse, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ, ဦးနှောက်ပုံရိပ်, အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်
1 ။ အပန်းဖြေ, ပြဿနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း
လောင်းကစား သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးတစ်ခုခုရရှိမှု၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်အန္တရာယ်မှာတန်ဖိုးတစ်ခုခုအားမရအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် (Potenza 2006) ။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကအများစုလောင်းကစားလုပ်တဲ့နှင့်အထင်ရှားဆုံးပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်မပါဘဲဒါလုပ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, လူကြီးများအကြားတွင်လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုအချို့သောအုပ်စုများ (ငယ်ရွယ်လူကြီးများ, စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ထောင်ချတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူလူ) အများအပြားခန့်မှန်းချက်ရှိခြင်းနှင့်အတူ 5% အဖြစ်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြ (မြင့်မားသောခေါက်Shaffer et al။ 1999) ။ ပြဿနာလောင်းကစားများ၏အများဆုံးပြင်းထန်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG), (အောက်တွင်ကြည့်ပါ), (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.5-1% ၏ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်ရှိပါတယ်Petri et al။ 2005) ။ , လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုးလာတရားဝင်လောင်းကစားများ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်၎င်း၏လူကြိုက်များပေးထားလောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေ၏တိကျသောအဆင့်ဆင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုမှတိုးမြှင့်အာရုံကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ် (Shaffer & Korn 2002).
ဒါဟာကြောင်း 1980 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ် တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါများအတွက် (DSM) သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများ (အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 1980) ။ အဆိုပါဝေါဟာရကို '' PG '' ဖြစ်ကောင်း obsessive-compulsive ရောဂါကနေရောဂါခွဲခြားရန်အားထုတ်မှုအတွက်အချိန်ပွဲတစ်ပွဲကိုပိုအသုံးများကြ၏ (ဥပမာ compulsive လောင်းကစားဝိုင်း) အခြားအသုံးအနှုန်းများ၏မျက်နှာသာအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသေးသည်။ pyromania, kleptomania, trichotillomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါအတူ PG လက်ရှိတွင် DSM အတွက် '' တခြားနေရာခွဲခြားမရချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ (ICD) 'အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ အလားတူပင် Disorders ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေးအတွက်ရောဂါ pyromania, kleptomania နှင့် trichotillomania နှင့်အတူ '' ငျြ့နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မမှန် 'အောက်ကခွဲခြားထားပါသည်။ မူးယစ်ဆေးမှီခို (DD) အတွက်သူတို့နှင့်အတူ PG ရှယ်ယာ features တွေအဘို့လက်ရှိအဖြေရှာတဲ့စံ၏အတော်များများက။ ဥပမာအားဖြင့်, သည်းခံစိတ်, ဆုတ်ခွာပစ်မှတ်ထားစံ, ပြန်ဖြတ်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မအောင်မြင်ကြိုးစားမှုထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ဘဝလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအဓိကဒေသများရှိ်ရောက်စွက်ဖက် PG နှင့် DD နှစ်ဦးစလုံးအတှကျစံတွင်ပါရှိသောနေကြသည်။ တူညီ, ဖြစ်စဉ် epidemiological, လက်တွေ့, မျိုးဗီဇနှင့်အခြားဇီဝ domains များ (မှတိုးချဲ့Goudriaan et al။ 2004; Potenza 2006; ဘရူ & Potenza 2008), PG အကောင်းဆုံးတစ်ဦး '' အမူအကျင့် '' စွဲလမ်းအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာစေခြင်းငှါရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်။
2 ။ တစ်ခုစွဲအဖြစ် PG
PG တစ်ခုစွဲကိုကိုယ်စားပြုပါက DD core ကို features တွေနှင့်အတူမျှဝေသင့်တယ်။ စှဲ core အစိတ်အပိုင်းများကိုအဆိုပြုထားအပါအဝင် (ဈ), ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကြားမှတစ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လက် (ii) အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကျော် Self-ထိန်းချုပ်မှုလျော့, အပြုအမူအတွက် (iii) compulsive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် (ဃ) တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်တတ်ပြီးသို့မဟုတ်ပြီ (ကြိုတင်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှပြည်နယ်စွဲလမ်းPotenza 2006) ။ ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာအဖြစ်ကဤအင်္ဂါရပ်များအတော်များများကအဖြစ်အခြားသူများ, (PG နှင့် DD မှသက်ဆိုင်ရာပေါ်လာPotenza 2006) ။ PG နှင့် DD နှစ်ဦးစလုံး၏တပြိုင်တည်းလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းရှုထောင့်သတ်မှတ်ကူညီသင့်ပါတယ်။ ဒါကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှအလယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်း PG ခုနှစ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမပါဘဲတစ်ဦးစွဲအဖြစ် conceptualized စေခြင်းငှါ, နှစ်ဦးစလုံးရောဂါ၏တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်စွဲ၏အဓိက neurobiological features တွေသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သည်နှင့်ထိရောက်သောကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
3 ။ Neurotransmitter စနစ်များနှင့် PG
တိကျတဲ့ neurotransmitters PG ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှပြန်ပြောပြဖို့တွေးဆခဲ့ကြသည်။ PG ၏လေ့လာမှုများနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားမမှန်ပေါ်တွင် အခြေခံ. , noradrenaline, arousal နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ရှုထောင့်မှအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ် ICDs အတွက်တွေးဆထားပြီးအမူအကျင့် Initiative နှင့်ရပ်နားခြင်း, ဆုချခြင်းနှင့်အားဖြည့်ဖို့ dopamine နှင့် opioids မှ serotonin ပျော်မွေ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်တိုက်တွန်းပါသည်။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားစနစ်များကိုအောက်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
လေ့လာရေး (မပါဘဲသူတို့အား PG အတူ 1980s နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယောက်ျားစဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေနှင့်အဆင့်မြင့် noradrenaline ၏အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်ဆီး၎င်း၏ metabolites, သွေးသို့မဟုတ်ယခင်အတွက် cerebrospinal fluid ကိုနမူနာကိုတွေ့ရွိုင်း et al။ 1988), နှင့် extraversion ၏အစီအမံဆက်နွယ်နေကြောင်း noradrenergic အစီအမံ (ရွိုင်း et al။ 1989) ။ လောင်းကစားသို့မဟုတ်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ pachinko ကစားနှင့်လောင်းကစားရုံ Blackjack အတူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ noradrenergic အစီအမံအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းဓါတ်လှေကားဖြစ်ပြီးတိုးနဲ့ဆက်စပ်တစ်ဦးချင်းစီ (Shinohara et al။ 1999; Meyer et al။ 2000) ။ လောင်းကစားရုံ Blackjack လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်းနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် noradrenergic အစီအမံ (မပါဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကလောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုနှင့်အတူယောက်ျားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့မှမွငျ့မားဖြစ်လာMeyer et al။ 2004) ။ arousal သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍအပြင်, noradrenaline PG ၏အခြားရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, noradrenergic လှုပ်ရှားမှုလွှမ်းမိုးမှု prefrontal cortical function ကိုနှင့် posterior အာရုံစူးစိုက်မှုကွန်ယက်များ, နှင့် adrenergic ယန္တရားများမှတဆင့်လုပ်ကိုင်ကြောင်းဆေးဝါးများ (ဥပမာပု noradrenaline သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး inhibitor atomoxetine နှင့် alpha-2 adrenergic clonidine နှင့် guanfacine agonists) အာရုံစူးစိုက်မှု၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်မှုဖြစ်ပြခဲ့ကြ -deficit hyperactivity ရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန် (Arnsten 2006) ။ Adrenergic မူးယစ်ဆေးဝါးများတိရိစ္ဆာန်အတွက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တိကျတဲ့ရှုထောင့်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ (လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်ပြသထားသည်Chamberlain & Sahakian ၂၀၀၇) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် adrenergic PG အတွက် function ကိုနှင့်၎င်း၏ကုသမှုများအတွက်အများအပြားဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုနှင့်ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကဤဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ဖို့ဒီဧရိယာထဲမှာလိုအပ်ပါသည်။
အစဉ်အလာ, serotonin function ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ဖြန်ဖြေအတွက်သိသိသာသာအရေးပါမှုဖြစ်စဉ်းစားလျက်ရှိသည်။ PG ရှိသူများအပါအဝင်ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်, (နဲ့အတူပြည်သူ့Nordin & Eklundh 1999) သို့မဟုတ်ထကြွလွယ်သောကျူးကျော် (Linnoila et al။ 1983), အ serotonin metabolite 5-hydroxy indoleacetic အက်ဆစ်၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုသရုပ်ပြပါပြီ။ ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ် (ဥပမာထကြွလွယ်သောကျူးကျော်) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာ PG သို့မဟုတ်အခြားမမှန်သို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များလုပ်ပေးထက် serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးတုံ့ပြန်မှုဖော်ပြရန်။ PG နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ '' မြင့်သော '' ကိုအောက်ပါအုပ်ချုပ်ရေးအစီရင်ခံတင်ပြ meta-chlorophenylpiperazine (ဍ-CPP က), မျိုးစုံ 5HT မှချည်နှောင်မယ့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း serotonin agonist1 နှင့် 5HT2 အဆိုပါ 5HT များအတွက်အထူးသဖြင့်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ receptors2c အဲဒီ receptor (DeCaria et al။ 1998; Pallanti et al။ 2006) ။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ၏တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, antisocial နယ်စပ်ဒေသများနှင့်အရက်ဘာသာရပ်များအားဖြင့်ယခင်ကအစီရင်ခံမြင့် ratings ဆင်တူခဲ့သည်။ မီတာ-CPP ကမှ Prolactin တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းယခင်လေ့လာ သာ. ကြီးမြင့်နှင့်တကွ, PG နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများခွဲခြားပါသေးသည်။
Serotonergic စုံစမ်းစစ်ဆေးချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဦးနှောက်ပုံရိပ်နှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) တွင်တစ်ဦးတုံးတုံ့ပြန်မှုမီတာ-CPP က (တုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်သည်မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကထကြွလွယ်သောကျူးကျော်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နယူး et al။ 2002) သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် agonist fenfluramine (Siever et al။ 1999(အရက်သမားအတွက်တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ), တသမတ်တည်းHommer et al။ 1997) ။ အခြားအစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) PG အတွက် vmPFC function ကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြပေမယ့်အလားတူလေ့လာမှုများ, PG အတွက်ယနေ့အထိဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
PG နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ dyscontrol အတွက် serotonin function ကိုများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းဒေတာအားငါပေးပြီ serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ (PG ၏ကုသမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီဘရူ et al။ 2008) ။ serotonin reuptake inhibitors ရောထွေးရလဒ်များကိုပြသပါ။ တဦးတည်းအသေး, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကို double-မျက်စိကန်း, fluvoxamine ၏ crossover ရုံးတင်စစ်ဆေးများတွင်တက်ကြွစွာနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာလက်နက် (တက်ကြွစွာမူးယစ်ဆေးရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, တရားခွင်၏ဒုတိယထက်ဝက်ကာလအတွင်းသိသိသာသာပုံမှန်ခဲ့ကြသည်Holland et al။ 2000) ။ တစ်ဦးကသီးခြားသေးငယ်တဲ့ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေးတက်ကြွ fluvoxamine နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (အကြားမရှိ, ခြားနားချက်လေ့လာတွေ့ရှိBlanco et al။ 2002) ။ အလားတူပင် paroxetine များထဲမှကျပန်း, ထိန်းချုပ်ထား, ကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှု (ရလဒ်များအရအိပ်ယာကျော်တက်ကြွမူးယစ်ဆေးဝါး၏သာလွန်သရုပ်ပြကင်မ် et al။ 2002), ပိုကြီးတဲ့, Multi-စင်တာ Random, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှုတက်ကြွမူးယစ်ဆေးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုတွေ့သော်လည်း (ဂရန် et al။ 2003) ။ ဤရွေ့ကားကနဦးစမ်းသပ်မှုတွေပုံမှန်အားဖြင့် Co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်လိုက်။ ကို double-မျက်စိကန်းပြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် escitalopram ၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့, Open-တံဆိပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး (PG နှင့် Co-ဖြစ်ပေါ်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်Grant & Potenza 2006) ။ open-တံဆိပ်အဆင့်စဉ်အတွင်းလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတိုင်းအတာတခုအကြီးအကျယ်အပြိုင်ဖက်ရှင်အတွက်တိုးတက်လာသည်။ တက်ကြွမူးယစ်ဆေးကျပန်းစဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းရလဒ်များအရအိပ်ယာကျပန်း, လောင်းကစားများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုပြန်လည်စတင်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ပဏာမပေမယ့်အဲဒီတွေ့ရှိချက်အရေးကြီးသောတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု PG နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားတည်ရှိနေ, ဤကွဲပြားခြားနားမှုကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကိုအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Dopamine (ကြိုးများနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုNestler 2004) ။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက် PG အတွက် dopamine များအတွက်အခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ သဲသဲကွဲကွဲမရှိသောတွေ့ရှိချက် (PG အတွက် cerebrospinal fluid dopamine ၏အတိုင်းအတာနှင့်၎င်း၏ metabolites များအတွက်အစီရင်ခံခဲ့ကြBergh et al။ 1997; Nordin & Eklundh 1999) ။ အလားတူပင် PG အပေါ်တဦးတည်းအစောပိုင်းမော်လီကျူးမျိုးဗီဇလေ့လာမှုအလားတူ PG, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန် (ဖြတ်ပြီး dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ DRD1 ၏ TaqA2 allele ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရလာ 1998) ။ မကြာခဏပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေးနှင့် DSM-IV diagnoses ရယူဘို့ထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းများသုံးပြီးထိုကဲ့သို့သောပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်လူမျိုးစုများနှင့်မပြည့်စုံအဖြေရှာတဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် stratification မရှိခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများအဖြစ်အတိုင်းအတာများကန့်သတ်မှုပါဝင်သည် PG ၏အစောပိုင်းမော်လီကျူးဗီဇလေ့လာမှုများ PG အတွက် TaqA1 allelic ကြိမ်နှုန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိကြပြီမဟုတ် (da Silva Lobo et al။ 2007) ။ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပမြေား PG ဘာသာရပ်များပါဝင်သောနှင့် dopamine (သို့မဟုတ်အခြား) စုံစမ်းစစ်ဆေး ligand-based နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. စနစ်များမတည်ရှိပါဘူး, ဒီလိုလေ့လာမှုတွေအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အရေးပါသောဧရိယာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
PG နှင့်အခြား ICDs များကိုပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) ရှိသူများမှတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည် dopamine နှင့်အခြားစနစ်များယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြခဲ့သည်။Jellinger 1991; Potenza et al။ 2007) ။ PD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (ဥပမာ pramipexole သို့မဟုတ် ropinirole အဖြစ်ဥပမာ levodopa သို့မဟုတ် dopamine agonists) dopamine function ကိုမြှင့်တင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးနဲ့ကုသနေကြသို့မဟုတ်ကြားဝင် (ဥပမာနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ) ဆက်စပ် circuitries မှတဆင့် neurotransmission မြှင့်တင်ရန်ကြောင်း (Lang & Obeso 2004) ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, PD အတွက် ICDs အလားအလာဟာအဆိုပါရောဂါ၏ pathophysiology ၎င်း၏ကုသမှု, ဒါမှမဟုတ်တကွအချို့ပေါင်းစပ်ရာမှပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ (PD နှင့်အတူရာပေါင်းများစွာသောတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ICDs စုံစမ်းစစ်ဆေးVoon et al။ 2006; Weintraub et al။ 2006) ။ ICDs dopamine agonists ထက်တိကျတဲ့အေးဂျင့်များ၏အတန်းနဲ့ဆက်စပ်နှင့် ICDs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအငယ်တို့ PD စတင်ခြင်းမှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ICDs နှင့်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီမှာလည်းချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအအချက်များပေါ်တွင်ကွဲပြားပါတယ်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု ICD ရှိသူများ (ကြိုတင် PD စတင်ခြင်းတစ်ခု ICD ကြုံတွေ့ခဲ့ကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်Weintraub et al။ 2006) ။ အခြားခုနှစ်, PG နှင့်မပါဘဲ PD ဘာသာရပ်များ (Impulse ၏အစီအမံ, အသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်မိသားစုရက်အားဖြင့်ခွဲခြားခဲ့ကြVoon et al။ 2007) ။ ဤအများနှင့်အခြားတစ်ဦးချင်းခြားနားချက် variable တွေကိုများ၏အလားအလာအလှူငွေ PD အတွက် ICDs များအတွက်၏ pathophysiologies နှင့်ကုသသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။ ပေမယ့် dopamine agonists ၏ပြတ်တောက်သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားထိုးနှင့်အတူ ICD symptomatology အတွက်သို့ရာတွင်နှင့်အမှုစီးရီးအစီရင်ခံစာတိုးတက်မှု (Mamikonyan et al။ 2008) ဤလေ့လာမှုများသဘောသဘာဝအတွက်ပဏာမနဲ့ထိန်းအကွပ်မဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏ပုံမှန်ဘက်လိုက်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူများကိုဒီဆေးတွေအလွဲသုံးစားမယ်သော်လည်းထို့အပြင်အချို့သောလူနာ (PD လက္ခဏာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြု levodopa မြင့်မားဆေးများသညျးမခံစခွေငျးငှါGiovannoni et al။ 2000; အီဗန် et al။ 2005) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ကိုပိုမိုသုတေသန PD အတွက် ICDs များအတွက်၏ pathophysiologies နှင့်ကုသသို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
(Opioids ပျြောမှေ့စနှင့်အကြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီနှင့် opioid function ကိုနျူကလီးယပ် accumbens သို့မဟုတ် ventral striatum ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာကနေချဲ့ထွင်သော mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် neurotransmission လွှမ်းမိုးနိုင်သည်Spanagel et al။ 1992) ။ ထိုကဲ့သို့သောအရက်မှီခိုအဖြစ် PG နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားကဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်တူညီ၏အခြေခံ, တွင်, opioid ရန် PG နှင့်အခြား ICDs ၏ကုသမှုအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, ကို double-မျက်စိကန်း, ကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေ naltrexone နှင့် nalmefene ၏ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်အကဲဖြတ်ပါပြီ။ high-ထိုး naltrexone (လေ့လာမှုထိုး၏ပျှမ်းမျှအဆုံး = 188 mg d-1; 250 အထိအထိ mg d-1) (PG ၏ကုသမှုအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ခဲ့တာကင်မ် et al။ 2001) ။ ခိုင်မာတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကုသမှုစတင်ခြင်းမှာတိုကျတှနျးထားဘို့အရက်မှီခိုအတွက်ကဲ့သို့ပင်ဆေးအထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်စေထင်ရှား၏။ သို့သော်အသည်း function ကိုစမ်းသပ်မူမမှန်ရေတိုရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းတက်ကြွမူးယစ်ဆေးကိုလက်ခံရရှိဘာသာရပ်များ၏ 20 ကျော်% အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ Nalmefene, အသည်း function ကိုချို့ယွင်းနဲ့ဆက်စပ်မ opioid ရန်, နောက်ပိုင်းတွင် (အကဲဖြတ်ခဲ့သည်ဂရန် et al။ 2006) ။ Nalmefene ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ကြီးနှင့်အသည်း function ကိုစမ်းသပ်မူမမှန်လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါ။ အများဆုံးထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်ဖေါ်ပြခြင်းဆေးထိုးသည့် 25 ခဲ့သည် mg d-1 ဆေးထိုးခြင်း, 50 ဖို့အကြမ်းဖျင်းညီမျှကြောင်းတဦးတည်း mg d-1 ပုံမှန်အားဖြင့်အရက်သို့မဟုတ် opiate မှီခို၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုထိုး။ အဖြစ်အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ဦးအပြုသဘောမူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှု, အရက်စာပေနှင့်ကိုက်ညီမယ့်တွေ့ရှိချက် (နှင့်ဆက်စပ်ရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းဖော်ထုတ် opioid ရန်လက်ခံရရှိ PG အတွက်ကုသမှုရလဒ်ကို၏တစ်ဦးကနောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဂရန် et al။ 2008) ။ အရက်ထဲမှာ opioid ရန်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကို (μ-opioid အဲဒီ receptor ကုဒ်သွင်းသည့်မျိုးဗီဇ၏ဥပမာ allelic မျိုးကွဲနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားအချက်များဖြစ်သောမှအတိုင်းအတာ; Oslin et al။ 2003) PG ရမ်းတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ကုသမှုကိုတိုးချဲ့ပါ။
အချိုမှု, အပေါများဆုံး excitatory neurotransmitter, (စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးကုန်သည်များ et al။ 2003; Kalivas & Volkow 2005) ။ အခြားအ ICDs အတွက် glutamatergic ကုထုံးတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုသည်ဤအချက်အလက်များနှင့်ပဏာမတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး (Coric et al။ 2007), အ glutamatergic Module အေးဂျင့် N-acetyl cysteine ​​(PG ၏ကုသမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်ဂရန် et al။ 2007) ။ အဆိုပါလေ့လာမှုပုံစံဒီဇိုင်းကို double-မျက်စိကန်းပြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် Open-တံဆိပ်ကုသမှုပါဝင်ပတ်သက်။ open-တံဆိပ်အဆင့်စဉ်အတွင်းလောင်းကစားဝိုင်း symptomatology သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ကို double-မျက်စိကန်းပြတ်တောက်ပြီးနောက်တိုးတက်မှုရလဒ်များအရအိပ်ယာမှ randomized သူတို့၏အမျိုးအ 83% အထိနှိုင်းယှဉ်ပါကတက်ကြွမူးယစ်ရန် randomized ဖြေဆိုသူ 29% အတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပဏာမဒေတာသည်၎င်း၏ကုသမှုများအတွက် PG နှင့် glutamatergic ကုထုံးမှ glutamatergic ပံ့ပိုးမှုများကိုသို့အပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေများအတွက်လိုအပ်ဖော်ပြသည်။
4 ။ အာရုံကြောစနစ်များ
အတော်လေးအနည်းငယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာခြင်းမရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက PG သို့မဟုတ်အခြား ICDs နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကွဲပြားပုံကိုလေ့လာပါပွီ။ တဦးတည်းကနဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှု (PG နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်တိုက်တွန်းသို့မဟုတ်တဏှာပြည်နယ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးPotenza et al။ 2003b) ။ လောင်းကစားဝိုင်းတိပ်ခွေများနှင့်ကြိုတင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္စိတ်ခွန်အားနိုးသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစတင်ခြင်းမှကြည့်ရှုသောအခါ, အပန်းဖြေသူမြားကိုနှိုငျးယှဉျအဖြစ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (PGers) အတော်လေးလျော့နည်းအသွေးတော်အောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) signal ကိုတိုကျရိုကျ cortical အတွက်ပြောင်းလဲမှု, Basal ganglionic နှင့် thalamic ဦးနှောက်ဒေသများပြသ ။ ဤရွေ့ကားအကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုကြည့်ရှု၏နှိုင်းယှဉ်ယုဂ်စဉ်အတွင်းပျော်ရွှင်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေအခြေအနေများစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိနှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်လက္ခဏာဒေါသလေ့လာမှုများနေစဉ်ယင်းဒေသအတော်လေးတိုးမြှင့် activation ကိုပြသတဲ့သူ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏လေ့လာမှုများ, များထံမှကွဲပြားကြသည်မဟုတ်ခဲ့ကြ (Breiter & Rauch 1996) ။ vmPFC အတွက်အတော်လေးလျော့နည်းသွား BOLD signal ကိုပြောင်းလဲမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအရှိဆုံးပုံမှန်ခဲ့ကြသည်မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက PG နှင့်အတူတိပ်ကြည့်ရှု၏နောက်ဆုံးကာလအတွင်းအများဆုံးကြံ့ခိုင်လောင်းကစားဝိုင်းလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြခဲ့ကြသည်မှာအချိန်, ယောက်ျား။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (အခြားအမူအကျင့် domains များအတွက်ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လေ့လာမှုများကနေသူများ, အထူးသကျူးကျော်အတူတသမတ်တည်းပေါ်လာSiever et al။ 1999; နယူး et al။ 2002) နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (Bechara 2003).
အခြားအပုံရိပ်လေ့လာမှုများ PG အတွက်တိုကျရိုကျဒေသများပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော်လည်း (Crockford et al။ 2005), မျိုးစုံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ PG အတွက် vmPFC function ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Stroop အရောင်-စကားလုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်အလုပ်တခုကို၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏လေ့လာမှုမရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက PG နှင့်အတူယောက်ျား incongruent လှုံ့ဆော်မှု (၏တင်ဆက်မှုသည်အောက်ပါလက်ဝဲ vmPFC အတွက်အတော်လေးလျော့နည်းသွား BOLD signal ကိုပြောင်းလဲမှုများကအများဆုံးပုံမှန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်Potenza et al။ 2003a) ။ တူညီသော fMRI Stroop ပါရာဒိုင်းဖျော်ဖြေတဲ့အခါ, စိတ်ကြွရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (vmPFC တစ်အလားတူဒေသတွင်း၌ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအနေဖြင့်အများဆုံးခွဲခြားခဲ့သည်Blumberg et al။ 2003), ပုမမှန်ဖို့ဘုံအချို့သောဒြပ်စင်များ (ဥပမာချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဆင်းရဲသောစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း) အဖြေရှာတဲ့နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ရှိအာရုံကြောအလွှာ share ကြောင်းအကြံပြု။ analog, PG နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်ချက်ချအကဲဖြတ်တစ်ဦး '' လောင်းကစားဝိုင်း '' လုပ်ငန်းတာဝန် (များတွင်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များလုပ်ခဲ့တယ်ထက် vmPFC ၏လျော့နည်း activation ပြသTanabe et al။ 2007).
အခြား fMRI လေ့လာမှုများတွင်မပါဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက PG နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအနိုင်ရနှင့်ဆုံးရှုံးအခြေအနေများနှိုင်းယှဉ်ထူးခွားသညျ့အတွက် simulated လောင်းကစားဝိုင်းစဉ်အတွင်း vmPFC ၏လျော့နည်း activation ပြပြီး, vmPFC အတွက် BOLD signal ကိုပြောင်းလဲမှု (PGers တို့တွင်အလောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုနှင့်အတူပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းReuter et al။ 2005) ။ မှိန်ဖျော့ activation ၏အလားတူပုံစံဟာ ventral striatum အတွက် PGers အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်တူညီသောလေ့လာမှုနှင့်အတူတူပင်ထူးခွားသညျ့သုံးပြီး, dopaminergic innervation နှင့်အတူဦးနှောက်ဒေသကျယ်ပြန့် (မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်Everitt & Robbins 2005) ။ မျောက်ဝံများအတွက်အလုပ်အပေါ် အခြေခံ. (Schultz et al။ 2000) လူသားများအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏လေ့လာမှုများ (ငွေကြေးဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုနှင့်အတူငွေကြေးဆုလာဘ်အလုပ်လုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် vmPFC ၏ activation အတူ ventral striatum ၏ activation ဆက်စပ်ပါပြီKnutson et al။ 2003) ။ ပိုကြီးတဲ့နှောင့်နှေးဆုလာဘ်များရွေးချယ်ခြင်းကိုပိုပြီး dorsal cortical ကွန်ရက်များကပါဝင်ပတ်သက်အတိုင်းဤ circuitry (ချက်ချင်းဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့မှအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပေါ်လာသောလူယာ et al။ 2004) ။ မှတ် Blackjack ကစားနှိုင်းယှဉ်ပါက Blackjack လောင်းကစားဝိုင်း (PGers အတွက် သာ. ကြီးမြတ် corticostriatal Active နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Holland et al။ 2005) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှု PG မပါဘဲဘာသာရပ်များမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးနှင့်အရှင် PG ဘာသာရပ်များအတွက်ရောဂါမရှိဘဲသူတို့အားထံမှကွဲပြားပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ simulated လောင်းကစားဝိုင်းပါရာဒိုင်းအတွက် PGers အတွက် ventral striatum ၏အတော်လေးလျော့နည်းသွား activation ၏တွေ့ရှိချက် (Reuter et al။ 2005) ထိုသို့သောချို့ယွင်းမှုအတွက်အန္တရာယ်မှာစှဲသို့မဟုတ်ထင်ရသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်၏လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငွေကြေးဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum ၏အတော်လေးလျော့နည်းသွား activation အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သတင်းပို့ခဲ့ပြီး (Hommer 2004; Wrase et al။ 2007) သို့မဟုတ်ကင်းမှီခို (CD ကို; Pearlson et al။ 2007) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လူကြီးများ (နှိုင်းယှဉ်ပါကမြီးကောင်ပေါက်အတွက်Bjork et al။ 2004) နှင့်အရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူသူတို့အား (မပါဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကHommer et al။ 2004) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏မျှော်လင့်အဆင့်စဉ်အတွင်း ventral striatum ၏အတော်လေးလျော့နည်းသွား activation ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့် ICDs များအတွက်အရေးပါသောကြားခံ phenotype ကိုယ်စားပြုအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
5 ။ အစာစားချင်စိတ် PG နှင့် CD ကိုအတွက်ပြည်နယ်များတိုက်တွန်း
အစာစားချင်စိတ်တတ်ပြီးသို့မဟုတ်တဏှာပြည်နယ်များမကြာခဏချက်ချင်းထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် PGers သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်လောင်းကစားအဖြစ်ပြဿနာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရင်အဦးနေရာ။ ကဲ့သို့သောဤပြည်နယ်များရဲ့အာရုံကြောဆက်စပ်တစ်ဦးနားလည်မှု (အရေးကြီးသောလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်များ et al။ 2006) ။ တစ်သိပ္ပံနည်းကျအမြင်ကနေ, PG သို့မဟုတ် DD နှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတဏှာပြည်နယ်များအဖြစ်အလားတူဖြစ်စဉ်များ၏လေ့လာမှုများစူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှု၏လွတ်လပ်သောမမှန်ဖြတ်ပြီးနောက်ခံစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များမှဗဟိုဖြစ်ကြောင်းကိုရှုထောင့်ရှင်းလင်းပေမည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးစေရန်, ကျနော်တို့ (PG အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းရမ္မက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများအလုပ်Potenza et al။ 2003b) နှင့် CD ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ (Wexler et al။ 2001) ။ သာအထီးဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းလေ့လာမှုအဖြစ်ကျနော်တို့ 10 PG ဘာသာရပ်များနှင့် 11 အပန်းဖြေလောင်းကစားသမားတွေအပါအဝင်နမူနာအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ယောက်ျားမှဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကန့်သတ် (ကို CPG အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းကြည့်ရှုအားပေးသူကိုဘာသာရပ်များ), fMRI နှင့်9CD ကိုဘာသာရပ်များနှင့်6Non-ကင်း-သုံးပြီးထိန်းချုပ်နှိုင်းယှဉ်ယောက်ျားစဉ်အတွင်းဝမ်းနည်းနှင့်ပျော်ရွှင်ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ (ကို CCD ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ကင်း, ဝမ်းနည်းနှင့်ပျော်ရွှင်ကးကြည့်ရှုအားပေးသူကိုဘာသာရပ်များ) ။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါထုံးစံ၌ဖြစ်သောစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဦးနှောက် Active မူးယစ်ဆေးစွဲ CD ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက PG ကဲ့သို့သောအပြုအမူစွဲအလားတူသို့မဟုတ်ကွဲပြားခဲ့ကြသည်ဖို့အတိုင်းအတာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောတိုကျရိုကျနှင့် anterior cingulate cortex အဖြစ်အဘယ်သူ၏ function ကိုကိုကင်းထိတွေ့မှုကလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရသည်ဦးနှောက်ဒေသများ, CD ကိုအတွက်ကိုကင်းမတရားသောအတွက် differential ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆခြင်းနှင့်လောင်းကစား PG အတွက်တိုက်တွန်းပါသည်။
ကျနော်တို့၏မျိုးဆက်အတွက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကို assign တစ် voxel-based Randomization လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြု p- စွဲလမ်းနေသည့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေများကိုကြည့်ရှုစဉ်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ကိုကင်းအုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်သောထိန်းချုပ်မှုပုံစံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဝတ္ထုများ၏ကွဲပြားခြားနားပုံကိုခွဲခြားသိမြင်စေသောမြေပုံများ (Wexler et al။ 2001; Potenza et al။ 2003b) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိပ်အမျိုးအစားကြည့်ရှုတစ်ခုချင်းစီဘာသာရပ်အုပ်စု, ကျွန်တော်တစ်ဦး generated tပျမ်းမျှအကျူးနဲ့ post-တိပ်မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင် baseline နှိုင်းယှဉ်ပါကကြည့်ရှုမြင်ကွင်းများ၏ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ် -map ။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီတိပ်အမျိုးအစားအဘို့, ငါတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ tဘေးဒဏ်သင့်ဘာသာရပ်များ (ဥပမာ PG) မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြားသောထုံးစံဓလေ့တို့ကိုခြားနား -maps (ဥပမာကို CPG), တစ်ဦး PG-C ကိုထုတ်လုပ်PG ဆနျ့ကငျြဘ။ Next ကိုကျနော်တို့ဘေးဒဏ်သင့်အုပ်စုများ ((PG-C မှာအဆိုပါစှဲဖြတ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြားသောထုံးစံနှိုင်းယှဉ်PG) - (CD-C ကိုCD); စားပွဲပေါ်မှာ 1a,) ကိုအီလက်ထရောနစ်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအတွက်ကိန်းဂဏန်း 1A ကြည့်ပါ။ တွင် p<0.005 နှင့်တင်းကြပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ 25 စပျစ်သီးပြွတ်ကိုအသုံးပြု။Friston et al။ 1994), ထိခိုက်နစ်နာနှင့် Non-ထိခိုက်ဘာသာရပ်အုပ်စုများအကြားထူးခွားသညျ့အတွက်ရောဂါ-related ကွဲပြားခြားနားမှု (အစွဲတိပ်ခွေများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်စားပွဲပေါ်မှာ 1a; ဝမျးနညျးဖှယျသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်ကး (မပြ) ကိုအီလက်ထရောနစ်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအတွက် 1A တွက်ဆ) သော်လည်းမကြည့်ပါ။ ventral နှင့် dorsal anterior cingulate နှင့်ညာဘက်ယုတ်ညံ့ parietal lobule ၏ဒေသများအတွက် (PG-C ကိုအတွက်အတော်လေးလျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုနှင့်တကွ, စွဲကး၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြPGအဆိုပါ (CD-C ကိုနှိုင်းယှဉ်ကဲ့သို့) ဆနျ့ကငျြဘCD) နှိုင်းယှဉ်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်သည်ဤကွဲပြားခြားနားမှုမှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုစာရင်းပြုစုထားသောနေကြသည် (စားပွဲပေါ်မှာ 1a) ။ အဆိုပါ anterior cingulate cortex ကျန်းမာအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတစ်ဦးနှောက်ဒေသ (ခြုံ et al။ 2000) နှင့် CD ကိုဘာသာရပ်များ (စတိန်း et al။ 2007), (ကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းသက်ဝင်စေဖို့ပြသထားသည်Childress et al။ 1999) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကို (anterior cingulate မြှင့်လုပ်ဆောင်Febo et al။ 2005), နှင့်အချိန်ကိုက်နှင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု anterior cingulate function ကို၏ပုံစံ (Harvey 2004) ။ ဘာသာရပ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးယုတ်ညံ့ parietal lobule activation အတွက်ခြားနားချက်အဓိကအားဖြင့်အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းမှထိန်းချုပ်အုပ်စုများနှင့်ကိုကင်းဗီဒီယိုတိပ်ခွေများ၏အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကွာခြားချက်ထင်ဟပ်။ အဆိုပါယုတ်ညံ့ parietal lobule ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စည်းမျဉ်းများ၏တုံ့ပြန်မှုတားစီးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီး (Menon et al။ 2001; Garavan et al။ 2006) ။ ထို့ကြောင့်တွေ့ရှိချက် (တစ်ဦးတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှု (simulated ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း) ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦးလူမှုရေးအရဒဏ်ခတ်အရေးယူအပြုအမူ (လောင်းကစား) ၏ဥပမာဖော်ပြချက်) ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာတိပ်ခွေကြည့်ရှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများ၏ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက် differential ကို activation နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ တားစီး။
PG နှင့် CD ကိုအတွက်ဦးနှောက် Active ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်ပါက။
ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်ကဲ့သို့သောဘေးဒဏ်အတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် ventral striatum ၏လျော့ activation အဖြစ်ကျနော်တို့အလားတူ CD ကိုနှင့် PG ်ပတ်သက်နေခဲ့ကြကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများခွဲခြားသတ်မှတ်မယ်လို့ hypothesizing, ကျနော်တို့လာမယ့်ကင်းတပ်ဖို့ဘုံဦးနှောက်ဒေသများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လောင်းကစားတိုကျတှနျးထားသ (Reuter et al။ 2005; Pearlson et al။ 2007) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိပ်အမျိုးအစားကြည့်ရှုတစ်ခုချင်းစီဘာသာရပ်အုပ်စု, ကျွန်တော်တစ်ဦး generated tပျမ်းမျှအကျူးနဲ့ post-တိပ် baseline မှကြည့်ရှုမြင်ကွင်းများ၏ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ် -map ။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီတိပ်အမျိုးအစားအဘို့ကျနော်တို့ created tPG-C ကိုထုတ်လုပ်သည်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီစိတ်ရှည်အုပ်စုသည်ခြားနားခြင်းအားဖြင့်လူနာအုပ်စုများအတွက် activation မူမမှန်ဖေါ်ပြခြင်း -maps,PG နှင့် CD-C ကိုCD ထူးခွားသညျ့။ အဆက်ဆက်အရေးပါမှုကိုတံခါးမှာ computer-generated နှိုင်းယှဉ် (p<0.005, p<0.01, p<0.02 နှင့် p<0.05) PG-C ကိုရသောဒေသများခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြသည်PG နှင့် CD-C ကိုCD ထူးခွားသညျ့အလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းအုပ်စုတစ်စု p-maps သည်ဤတွေ့ရှိချက်မှပံ့ပိုးဦးနှောက်ဒေသများသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်စွဲလမ်းမင်္ဂလာနှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်တိပ်ခွေအဘို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြု. ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုတင်လေ့လာမှုများကြိုတင်စိတ်ခွန်အားနိုး / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏သတင်းပေးပို့စတင်ခြင်းမှတိပ်ကြည့်ရှု၏ကနဦးကာလ, (ထိုစွဲဗီဒီယိုတိပ်ခွေမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအကြား-အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သရုပ်ပြအဖြစ်Wexler et al။ 2001; Potenza et al။ 2003b), ကျနော်တို့ pre-တိပ်အခြေခံမှနှိုင်းယှဉ်ပါကတိပ်ခွေကြည့်ရှု၏ကနဦးကာလအာရုံစိုက်အလားတူစမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (မျိုးစုံကိုဦးနှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်စားပွဲပေါ်မှာ 1b; သက်ဆိုင်ရာစွဲတိပ်ခွေများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းစွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအကြားထူးခွားသညျ့အလားတူလှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်း) ကိုအီလက်ထရောနစ်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအတွက်ကိန်းဂဏန်း 1B မြင်လျက်အဘယ်သူမျှမဒေသများဝမျးနညျးဖှယျသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်တိပ်ခွေ (ပြမပါ) နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိုင်းယှဉ်အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
Non-စွဲဘာသာရပ်အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါစွဲအတွက်ဘုံ activation ပုံစံများဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့အထောက်အကူပြုကြောင်းတိုင်းဒေသကြီး, ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်စွဲကုသမှုရလဒ်ကိုပါဝင်သည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဤဒေသများထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်သော်လည်းမစွဲသောသူတို့၏အတွက် activated ခဲ့ကြသည်။ ventral striatum ၏အတော်လေးလျော့နည်းသွား activation PG နှင့် CD ကိုဘာသာရပ်အုပ်စုများအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှငျ့ပတျသကျသောတာဝန်များကိုအပေါ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ, (နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်စွဲဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Reuter et al။ 2005; Pearlson et al။ 2007) ။ prefrontal cortex ၏ Ventral အစိတ်အပိုင်းများ, အထူးသ orbitofrontal cortex, (ဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေကြပြီSchultz et al။ 2000; Knutson et al။ 2003; လူယာ et al။ 2004), နှင့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အပြုအမူလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချ (ယခင်ကဆုခခြံတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖိနှိပ်မှုကပါဝင်ပတ်သက်လမ်းပြလိုအပ်သည့်အခါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒေသ activate လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်Elliott သည် et al။ 2000) ။ ထိုသို့သောယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus အဖြစ် ventral prefrontal cortex ၏ lateral ဒေသများ, ထို့အပြင် (တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်သိသာအရေးပါမှုဖြစ်စဉ်းစားနေကြတယ်Chamberlain & Sahakian ၂၀၀၇) ။ အဘယ်သူ၏ activation ပုံစံများစွဲခွဲခြားနှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ Non-စွဲဘာသာရပ်များလည်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီသည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျန်းမာဘာသာရပ်များပတျသကျတဲ့ Go ကို / NoGo ပါရာဒိုင်းထဲမှာ, insula, precuneus နှင့် posterior cingulate တုံ့ပြန်မှုတားစီးနေစဉ်အတွင်းအမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် orbitofrontal cortex နဲ့ lingual gyrus စဉ်အတွင်း activated ခဲ့ကြသည် (Menon et al။ 2001) ။ နောက်ကျနေခဲ့သည် activation ကိုလည်းသတိရမ္မက်ကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်, အရှင် (စွဲလမ်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါCraig 2002; Naqvi et al။ 2007) ။ အစပျိုးခြင်းဆင်းရဲသားကို Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအထောက်အကူပြုနိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေကိုတုန့်ပြန်၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဤဒေသများကိုသက်ဝင်စွဲဘာသာရပ်များ၏ကျရှုံးခြင်း။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PG နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကုသမှုရလဒ်ကိုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, insula ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနိုင်ရတဲ့၏အလေးသာမှလေးစားမှုနှင့်အတူကစားနည်းကိုထိန်းညှိဖို့တစ်ဦးပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်ချို့ယွင်းလောင်းကစားအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နှင့်အရှင်ချို့ယွင်း activation (PG မှအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်စေခြင်းငှါ,Clark က et al။ 2008) ။ ကိုကင်းဗီဒီယိုတိပ်ခွေများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း cingulate activation Posterior (ဒီဦးနှောက်ဒေသ သာ. ကြီးမြတ် activation ဖေါ်ပြခြင်းရှောင်ကြဉ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်သောသူတို့နှင့်အတူ, CD ကိုဘာသာရပ်များအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကုန်ကျစရိတ်များ et al။ 2006) ။ ဤအရလဒ်များကိုဘာသာရပ်များ၏အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီ၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့နမူနာပေးထားသောပဏာမထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်ဖြစ်သော်လည်းထို့ကြောင့်ယင်းတွေ့ရှိချက် PG, မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်ပိုမိုကြီးမားစာပေ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်ဖြည့်စွတ်။ ပိုကြီးတဲ့နှင့်ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားနမူနာပါဝင်သောအပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကဤတွေ့ရှိချက်အတည်ပြုရန်နှင့်တိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
6 ။ ကောက်ချက်နှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုအတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း PG ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာ၌ကြပြီဖြစ်သော်လည်း, သိသိသာသာကွာဟချက်အဆိုပါရောဂါ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာ၌ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာယနေ့အထိဇီဝလေ့လာမှုများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကို, တွေ့ရှိချက်များ၏ယေဘုယျနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်အများစုသို့မဟုတ်သီးသန့်ယောက်ျား၏သေးငယ်တဲ့နမူနာပါဝင်ကြသည်။ လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (မိန်းမတို့အဘို့ပြဿနာလောင်းကစားအမျိုးအစားများမှလေးစားမှုနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံစံများဘို့နှစ်ခုလုံးကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပြီPotenza et al။ 2001) ။ ဥပမာ, '' တယ်လီစကုပ် '' ဖြစ်ရပ်ဆန်း, Initiative နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏ပြဿနာအဆင့်ဆင့်အကြား foreshortened အချိန်ဘောင်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပထမဦးဆုံး DD ပိုမကြာသေးမီက, ရက်များအတွက်ဖော်ပြထားနှင့်မကြာသေးမီကပြဿနာနှင့် PG (များအတွက်ခဲ့သည်Potenza et al။ 2001) ။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပေးထား, PG ၏အခြေခံဇီဝဗေဒသို့စာမေးပွဲလိင်၏အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အလားတူပင်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါဗေဒ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့် neurocircuitry ၏ differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်းဒေတာအားငါပေးပြီဇီဝစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် (ဥပမာ ventral နှိုင်းယှဉ် dorsal striatum) အပြုအမူတွေအဖြစ် (လေ့သို့မဟုတ် compulsive ပိုမိုဝတ္ထုသို့မဟုတ်ထကြွလွယ်သောအနေဖြင့်တိုးEveritt & Robbins 2005; ကုန်သည်များ et al။ 2007; Belin & Everitt ၂၀၀၈; ဘရူ & Potenza 2008) ။ အပိုဆောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် Impulse ၏သဘောသဘာဝနှင့် ICDs နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုးပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကပိုလောင်းကစားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, ပိုပြီးလောင်းကစားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ် Impulse ကဲ့သို့ဘုံအချက်များအသီးအသီးဒိုမိန်းအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝ setting တွင်ထိုအဖြစ်နိုင်ခြေအားရှင်းလင်းထားသည့် (ကဆေးခန်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျသက်ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုDalley et al။ 2007) ။ Impulse ရှုပ်ထွေးပြီးမျက်နှာစာ Construction (ကြောင်းကိုပေးထားMoeller et al။ 2001), PG နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းများအတွက်၏ pathophysiologies နှင့်ကုသဆက်စပ်ပုံကိုတိကျတဲ့ရှုထောင့်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ PG ပွဲတစ်ပွဲလက်ရှိအဖြေရှာတဲ့လက်စွဲထဲမှာအတူတူခွဲခြားဖြစ်ကြောင်း ICDs ၏အုပ်စုတစု၏လေ့လာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အပိုဆောင်းသုတေသန (ဤရောဂါထက် သာ. ကြီးမြတ်သော psychopathology ၏အမှတ်အသားများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အထူးသဖြင့်အဖြစ်အခြား ICDs နှင့်၎င်းတို့၏ neurobiology, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုသို့လိုအပ်နှင့်လက်တွေ့ setting တွင်မကြာခဏ undiagnosed သွားကြဖို့လက်ရှိပေါ်လာနေသည်ဂရန် et al။ 2005).
Bruce Wexler နှင့် Cheryl Lacadie တို့သည်တင်ပြထားသောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လုပ်ငန်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် (i) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (R01-DA019039, R01-DA020908, P50-DA016556, P50-DA09241, P50DA16556, P50-AA12870) နှင့်အမျိုးသားအရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်သေစာ (RL1-AA017539) , P50-AA015632) နှင့်သုတေသနအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသားစင်တာ (UL1-RR024925); (၂) ယေးလ်တွင်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးသုတေသန၊ (၃) အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနရုံး၊ (၄) အမေရိကန်စစ်ပြန်ရေးရာဌာန VISN1 MIRECC နှင့် REAP ။
ဖွင့်လှစ်ခြင်း။ ဒေါက်တာ Potenza ကသူသည်အစီရင်ခံစာ၏အကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခမရှိခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza သည်အောက်ပါတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသို့မဟုတ်လျော်ကြေးငွေရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza သည် Boehringer Ingelheim အတွက်အကြံပေးဖြစ်ပြီးအကြံပေးသည်။ Somaxon တွင်အကြံဥာဏ်တောင်းခံခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများရှိခြင်း၊ Mohegan Sun နှင့်သစ်တောဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ Ortho-McNeil နှင့် Oy-Control / Biotie ဆေးဝါးများမှအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန၊ သုတေသနဌာနမှသုတေသနအထောက်အပံ့များရရှိခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၊ ICDs သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောစစ်တမ်းများ၊ စာပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ICDs နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်ဥပဒေရုံးများနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုံးတို့အတွက်အကြံပေးခြင်း၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အခြားအေဂျင်စီများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ကျန်းမာရေးပညာရေးဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာနေရာများတွင်ပညာသင်ကြားမှုများပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးကျမ်းကိုထုတ်ဝေသူများအတွက်စာအုပ်များသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နှင့် Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲဝန်ဆောင်မှုများပြProbleနာလောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်။
American Psychiatric Association ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1980 ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။
အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ Arnsten AF အခြေခံစည်းမျဉ်း: ဆားကစ်များနှင့်လမ်းကြောင်း။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;67(ပျော့ပျောင်း 8 ။ ): 7-12 ။ [PubMed]
Bechara အေအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲလမ်း။ ဂျေလောင်းကစားဝိုင်း။ လုံး။ 2003;19: 23-51 ။ Doi: 10.1023 / A: 1021223113233 [PubMed]
ဘီးလင်း: D, Everitt BJ ကင်းအလေ့အထများရှာ dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;57: 432-441 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2007.12.019 [PubMed]
Bergh ကို C, Eklund T က, Sodersten P ကို, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Nordin C. ALTER dopamine function ကို။ Psychol ။ Med ။ 1997;27: 473-475 ။ Doi: 10.1017 / S0033291796003789 [PubMed]
Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, ဆယ်ကျော်သက်အတွက် Hommer DW ယ့-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: ငယ်ရွယ်လူကြီးများအနေဖြင့်တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2004;24: 1793-1802 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4862-03.2004 [PubMed]
Blanco, C, Petkova အီး, Ibanez တစ်ဦးက, Saiz-Ruiz ဂျေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် fluvoxamine ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ အမ်း။ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;14: 9-15 ။ [PubMed]
et al Blumberg HP က။ စိတ်ကြွရောဂါ၏တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: ventral prefrontal cortical အတွက်မှုတွင်နှင့်ရို-related ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;60: 601-609 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.60.6.601 [PubMed]
Breiter HC, Rauch SL Functional MRI နှင့် OCD ၏လေ့လာမှု: လက္ခဏာဒေါသကနေ cortico-striatal စနစ်များနှင့် amygdala ၏သိမြင်မှု-အပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ Neuroimage ။ 1996;4: S127-S138 ။ Doi: 10.1006 / nimg.1996.0063 [PubMed]
ဘရူဂျာ Potenza MN ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Pharmacol ။ 2008;75: 63-75 ။ Doi: 10.1016 / j.bcp.2007.06.043 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘရူဂျာ Grant က je, Potenza MN ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု။ စွဲခြင်းရောဂါ။ ဆက်ဆံပါ။ 2008;7: 1-14 ။ doi:10.1097/ADT.0b013e31803155c2
ဘုရ်ှ GW, Luu P ကို, Posner MI သိမှုနှင့် anterior cingulate cortex အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 2000;4: 215-222 ။ doi:10.1016/S1364-6613(00)01483-2 [PubMed]
ချိန်ဘာလိန် SR, Sahakian BJ Impulse ၏ neuropsychiatry ။ Curr ။ Opin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;20: 255-261 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများ Potenza MN Developmental neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160: 1041-1052 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.160.6.1041 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, Bickel wk, Potenza MN လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွဲလမ်းတစ်စကေး-အခမဲ့စနစ်တွေသီအိုရီ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2007;31: 1017-1045 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2007.04.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်မက်စဉ်အတွင်း Childress AR, Mozely PD, McElgin W, Fitzgerald J, Reivich M, O'Brien CP Limbic activation ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;156: 11-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ် insular နှင့် ventromedial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သော Clark, L. , Bechara, A. , Damasio, H. , Aitken, MRF, Sahakian, BJ & Robbins ။ ဦးနှောက်ကို131, 1311-1322 ။ (Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / awn066) [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လာ DE ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ CNS Spectr ။ 1998;3: 20-37 ။
Coric V ကို, Kelmendi B, Pittenger ကို C, Wasylink S က, trichotillomania ရောဂါလူနာအတွက် antiglutamatergic အေးဂျင့် riluzole ၏ Bloch MH ကြိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;68: 170-171 ။ [PubMed]
Craig အေဒီသင်မည်သို့ခံစားရသနည်း Interoception: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မအခွအေနေ၏အသိ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2002;3: 655-666 ။ Doi: 10.1038 / nrn894 [PubMed]
Crockford DN, Goodyear B, Edwards က J ကို, Quickfall J ကို, El-Guabely N. Cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေပါ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;58: 787-795 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.04.037 [PubMed]
et al Dalley JW ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007;315: 1267-1270 ။ Doi: 10.1126 / science.1137073 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
da Silva Lobo DS, Vallada HP က, နိုက်ဂျေမာတင်အက်စ်အက်စ်, Tavares H ကို, တပါးအမျိုးသားတို့သည် V ကို, စိတ်တိုးပွား sib-အားလုံးအတွက်ကနေဒီ JL Dopamine ဗီဇနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ ဂျေလောင်းကစားဝိုင်း။ လုံး။ 2007;23: 421-433 ။ Doi: 10.1007 / s10899-007-9060-x [PubMed]
DeCaria CM, Begaz T က, Holland အီး Serotonergic နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် noradrenergic function ကို။ CNS Spectr ။ 1998;3: 38-47 ။
Elliott သည် R ကို, Dolan RJ သည် medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex အတွက် Frith CD ကို Dissociable လုပ်ဆောင်ချက်များကို: လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ Cereb ။ cortex ။ 2000;10: 308-317 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 10.3.308 [PubMed]
အီဗန် AH, လောရင့်အေဒီ, Potts J ကို, အယူခံ S က, Lees AJ ပါကင်ရောဂါအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု compulsive မှလွယ်ကူစွာထိခိုက်လွှမ်းမိုးအကြောင်းခံအချက်များ။ အာရုံကြော။ 2005;65: 1570-1574 ။ Doi: 10.1212 / 01.wnl.0000184487.72289.f0 [PubMed]
Everitt B ကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းများအတွက်အားဖြည့်များ၏ Robbins TW ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များ: compulsion မှအလေ့အထများမှလုပ်ရပ်များမှသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 2005;8: 1481-1489 ။ Doi: 10.1038 / nn1579 [PubMed]
Febo M က, Segarra AC အ, Nair က G, Schmidt ကငွေကျပ်, Duong TK, ကူးတို့ CF နိုးကြွက်များတွင်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အားဖြင့်ထင်ရှားထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုများ၏အာရုံကြောအကျိုးဆက်များ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 936-943 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300653 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Friston KJ, Worsleym KJ, Frackowiak RSJ, Mazziotta JC, အီဗန် AC အ၎င်းတို့၏ Spatial အတိုင်းအတာကို အသုံးပြု. focal Active ၏အရေးပါမှုများကိုသုံးသပ်ခြင်း။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 1994;1: 214-220 ။ Doi: 10.1002 / hbm.460010207
Garavan H ကို, Hester R ကို, မာဖီ K ကို Fassbender ကို C, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒအတွက်ကယ်လီ C. တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ ဦးနှောက် Res ။ 2006;1105: 130-142 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2006.03.029 [PubMed]
Giovannoni, G, O'Sullivan JD, Turner K, Manson AJ, Lees AJL Hedonic homeostatic dysregulation dopamine အစားထိုးကုထုံးအပေါ်လူနာများအတွက်ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများ။ ဂျေ Neurol ။ Neurosurg ။ Psychiatric ။ 2000;68: 423-428 ။ Doi: 10.1136 / jnnp.68.4.423 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း RZ, Tomasi: D, Rajaram က S, ဝါဂွမ်း LA က, Zhang က L ကို, Maloney T က, Telang က F, Alia-Klein N က, အ anterior cingulate ၏ Volkow အဲန်ဒီအခန်းက္ပနှင့်ကိုကင်းစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို processing အတွက် orbitofrontal cortex medial ။ neuroscience ။ 2007;144: 1153-1159 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2006.11.024 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goudriaan AE, Oosterlaan J ကို, က de Beurs အီး, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါးဒဗလျူရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: biobehavioral တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004;28: 123-141 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2004.03.001 [PubMed]
ကို double-မျက်စိကန်းပြတ်တောက်နဲ့ Open-တံဆိပ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု: je, Co-ဖြစ်ပေါ်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ Potenza MN Escitalopram ကုသမှုပေးသနား။ int ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2006;21: 203-209 ။ Doi: 10.1097 / 00004850-200607000-00002 [PubMed]
multi-စင်တာထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized: je ကင်မ် SW, Potenza MN, Blanco, C, Ibanez တစ်ဦးက, Stevens LC, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ Zaninelli R. Paroxetine ကုသမှုပေးသနား။ int ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2003;18: 243-249 ။ Doi: 10.1097 / 00004850-200307000-00007 [PubMed]
Grant က je, Levine L ကိုကင်မ်: D, အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Potenza MN Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162: 2184-2188 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.11.2184 [PubMed]
je, Potenza MN, Holland, E, Cunningham-Williams က RM, Numinen T က, Smits, G, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုထဲမှာ opioid ရန် nalmefene ၏ Kallio အေပေါင်းစုံပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုပါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163: 303-312 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.163.2.303 [PubMed]
je ကင်မ် SW, Odlaug BL ပေးသနား Nရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု -acetyl cysteine ​​တစ်ဦးအချိုမှု-ပြောင်းလဲပစ်အေးဂျင့်: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;62: 652-657 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2006.11.021 [PubMed]
Kim, SW, Hollander, E. & Potenza, MN 2008 ။ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းများတွင်ဘိန်းတိုက်ဖျက်သူများအားတုံ့ပြန်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း။ Psychopharmacology (doi:10.1007/s00213-008-1235-3) [PubMed]
ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အပေါ် Harvey ဂျေအေကင်းဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004;27: 751-764 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.11.006 [PubMed]
Holland, E, DeCaria CM, Finkell ဖြစ်မှု, Begaz T က, Wong က CM, Cartwright C. တစ်ဦးကရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ကို double-မျက်စိကန်း fluvoxamine / ရလဒ်များအရအိပ်ယာ crossover ရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;47: 813-817 ။ doi:10.1016/S0006-3223(00)00241-9 [PubMed]
Holland ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်အီး, Pallanti S ကို, ရော့စီ NB, Sood အီး, Baker BR, Buchsbaum က MS Imaging ကငွေကြေးဆုလာဘ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဂျေ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;6: 113-120 ။ Doi: 10.1080 / 15622970510029768 [PubMed]
Hommer, အရက်ထဲမှာဃ 2004 Motivation ။ တွင် int ။ Conf ။ အရက်မှ Neuroimaging, New Heaven, CT ၏ Applications ကိုပေါ်.
Hommer: D, Andreasen P ကို, ရီယို: D, Williams ဟာ W က, Rettimann ဦး, Monenan R ကို, Zametkin တစ်ဦးက, ရောလ် R ကို, Linnoila အမ်သက်ရောက်မှုများ mဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချအပေါ် -chlorophenylpiperazine: အရက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များတစ် positron ထုတ်လွှတ် tomographic နှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ neuroscience ။ 1997;17: 2796-2806 ။ [PubMed]
Hommer DW, Bjork JM, Knutson B, Caggiano: D, Fong သည်, G, အရက်သမားသားအတွက်ညု C. Motivation ။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 2004;28: 22A ။ Doi: 10.1097 / 00000374-200408002-00412
ပါကင်ဆန်ရောဂါ Jellinger KA ရောဂါဗေဒ: nigrostriatal လမ်းကြောင်းထက်အခြားရောဂါဗေဒ။ Mol ။ Chem ။ Neuropathol ။ 1991;14: 153-197 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow အဲန်ဒီစွဲလမ်း၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162: 1403-1413 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.8.1403 [PubMed]
Kim က SW, Grant က je, Adson DE, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုရှင် YC ကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;49: 914-921 ။ doi:10.1016/S0006-3223(01)01079-4 [PubMed]
Kim က SW, Grant က je, Adson DE, ရှင် YC, Zaninelli R. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါကုသမှုအတွက် paroxetine ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;63: 501-507 ။ [PubMed]
Knutson B, Fong သည် GW, Bennett က SM, အဒမ် CM, Hommer ဃ mesial prefrontal cortex ပုဒ် monetarily ကြိုးရလဒ်များတစ်ဒေသ: လျင်မြန်စွာဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Neuroimage ။ 2003;18: 263-272 ။ doi:10.1016/S1053-8119(02)00057-5 [PubMed]
Kosten TR, Tucker Ka BE Scanley, Oliveto တစ်ဦးကမင်းသားကို C, Sinha R ကို, Potenza MN, Skudlarski P ကို, Wexler ကင်းမှီခိုလူနာ Cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများနှင့် relapse BE ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31: 644-650 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300851 [PubMed]
Lang AE, Obeso JA ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်စိန်ခေါ်မှုများ - nigrostriatal dopamine စနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet Neurol ။ 2004;3: 309-316 ။ doi:10.1016/S1474-4422(04)00740-9 [PubMed]
Linnoila M က, Virkunnen M က, Scheinen M က, Nuutila တစ်ဦးက, Rimon R ကို, Goodwin ကအက်ဖ်အနိမျ့ cerebrospinal fluid5hydroxy indolacetic အက်ဆစ်ပြင်းအားမဟုတ်တဲ့ထကြွလွယ်သောအကြမ်းဖက်အပြုအမူကနေထကြွလွယ်သောခွဲခြား။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1983;33: 2609-2614 ။ doi:10.1016/0024-3205(83)90344-2 [PubMed]
ပါဆန်ဆန်ရောဂါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်ရောဂါများကိုကာလရှည်နောက်ဆက်တွဲလိုက်နာခြင်း Mamikonyan E၊ Siderowf အေဒီ၊ Duda JE၊ Potenza MN၊ Horn S၊ Stern MB ။ MOV ။ disorders ။ 2008;23: 75-80 ။ Doi: 10.1002 / mds.21770 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လူယာက S, Laibson ပစ, Loewenstein, G, Cohen ကို JD သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 2004;306: 503-507 ။ Doi: 10.1126 / science.1100907 [PubMed]
Menon V ကို, Adleman NE, White က CD ကို, ဂလိုဗာ GH, Reiss AL မှားယွင်းနေသည်-related ဦးနှောက်ကို Activation တစ် Go ကို / NoGo တုံ့ပြန်မှုတားစီးတာဝန်စဉ်အတွင်း။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 2001;12: 131-143 ။ doi:10.1002/1097-0193(200103)12:3<131::AID-HBM1010>3.0.CO;2-C [PubMed]
Meyer, G, Hauffa ကို BP, Schedlowski M က, Pawluk ကို C, Stadler MA, Exton က MS ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းပုံမှန်လောင်းကစားသမားတွေအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်တံထွေး cortisol တိုးပွားစေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;48: 948-953 ။ doi:10.1016/S0006-3223(00)00888-X [PubMed]
Meyer, G, Schwertfeger J ကို, Exton က MS, Janssen oe, Knapp W က, Stadler MA, Schedlowski M က, ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားရုံလောင်းကစားဝိုင်းမှ Kruger TH Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 2004;29: 1272-1280 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2004.03.005 [PubMed]
Moeller အပြည်ပြည်သွား, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC အစိတ်ရောဂါ Impulse ၏ရှုထောင့်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 1783-1793 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.158.11.1783 [PubMed]
Naqvi နယူးဟမ်းရှား, Rudrauf: D, Damasio H ကို, အ insula မှ Bechara အေပျက်စီးခြင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်စွဲ disrupts ။ သိပ္ပံ။ 2007;5811: 531-534 ။ Doi: 10.1126 / science.1135926 [PubMed]
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ Nestler EJ Molecular ယန္တရားများ။ Neuropharmacology ။ 2004;47: 24-32 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2004.06.031 [PubMed]
et al နယူး AS ။ ရန်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ prefrontal cortical 18-fluorodeoxyglucose positron ထုတ်လွှတ် tomography တုံ့ပြန်မှု metaထကြွလွယ်သောကျူးကျော်အတွက် -chlorophenylpiperazine ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;59: 621-629 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.59.7.621 [PubMed]
Nordin ကို C, ရောဂါဗေဒအထီးလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Eklundh တီ ALTER CSF 5-HIAA သဘော။ CNS Spectr ။ 1999;4: 25-33 ။ [PubMed]
Oslin DW, Berrettini W, Kranzler HR, Pettinate H, Gelernter J, Volpicelli JR, O'Brien CP ။ mu-opioid receptor gene ၏အလုပ်လုပ်သော polymorphism သည်အရက်မှီခိုသောလူနာများတွင် naltrexone တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Neuropsychophamacology ။ 2003;28: 1546-1552 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300219 [PubMed]
Pallanti S ကို, ဘာနာဒီက S, Quercioli L ကို, DeCaria ကို C, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Holland အီး serotonin ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်ပါးစပ်မီတာ-CPP ကမှ prolactin တုံ့ပြန်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ CNS Spectr ။ 2006;11: 955-964 ။ [PubMed]
Pearlson, GD, Shashwath, M. , Andre, T. , Hylton, J. , Potenza, MN, Worhunsky, P. , Andrews, M. & Stevens, M. 2007 ယခင်ကော်ကိုချိုးဖောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်၏ပုံမှန်မဟုတ်သော fMRI လှုပ်ရှားမှု ။ In Neuropsychopharmacology နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ, Boca Raton, FL ၏အမေရိကန်ကောလိပ်.
Petri မိုင်, Stinson FS, DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်၏ Grant က BF Co-ရောဂါ: အရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;66: 564-574 ။ [PubMed]
Potenza MN မမှန် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006;101(ပျော့ပျောင်း 1 ။ ): 142-151 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2006.01591.x [PubMed]
Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin S, Wu R, Rounsaville BJ, O'Malley SS Gender နှင့်သက်ဆိုင်သောလောင်းကစားလောင်းကစားလိပ်ကို အသုံးပြု၍ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 1500-1505 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.158.9.1500 [PubMed]
Potenza MN, Leung အိပ်ချ်-C မှာ, Blumberg HP က, Peterson BS, Skudlarski P ကို, Lacadie ကို C, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကို၏ဂိုး JC တစ်ခု fMRI Stroop လေ့လာမှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003a;160: 1990-1994 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.160.11.1990 [PubMed]
Potenza MN, Steinberg, MA, Skudlarski P ကို, Fulbright RK, Lacadie ကို C, Wilber MK, Rounsaville BJ, ဂိုး JC, Wexler ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်ရမ္မက်လောင်းကစားရ: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003b;60: 828-836 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.60.8.828 [PubMed]
Potenza MN, Voon V, Weintraub Dr ။ မူးယစ်ဆေးထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည့်စိတ်ဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြandနာများနှင့် dopamine ကုထုံးများ။ နတ်။ Clin ။ Pract ။ neuroscience ။ 2007;3: 664-672 ။ Doi: 10.1038 / ncpneuro0680 [PubMed]
Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါ Glascher J ကို, Buchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ်။ neuroscience ။ 2005;8: 147-148 ။ Doi: 10.1038 / nn1378 [PubMed]
ရွိုင်းတစ်ဦးက, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ တစ်ဦးက psychobiological လေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988;45: 369-373 ။ [PubMed]
ရွိုင်းတစ်ဦးက, de Jong က J ကို, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Linnoila အမ် Extraversion: noradrenergic function ကို၏အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989;46: 679-681 ။ [PubMed]
Schultz W က, Tremblay L ကို, မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက် Hollerman JR ဆုကြေးအပြောင်းအလဲနဲ့။ Cereb ။ cortex ။ 2000;10: 272-284 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 10.3.272 [PubMed]
Shaffer HJ, Korn DA လောင်းကစားနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ရောဂါ: တစ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Annu ။ ဗျာပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2002;23: 171-212 ။ Doi: 10.1146 / annurev.publhealth.23.100901.140532 [PubMed]
Shaffer HJ, ခန်းမ MN, Vander Bilt ဂျေအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါ disorders လောင်းကစားများ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုခနျ့မှနျး: တစ်သုတေသနပြုပေါင်းစပ်။ နံနက်။ ဂျေပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 1999;89: 1369-1376 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shinohara K ကို Yanagisawa တစ်ဦးက, Kagota Y ကို, Gomi တစ်ဦးက, Nemoto K ကို Moriya အီး, Furusawa အီး, Furuya K ကို Tersawa K. ဇီဝ Pachinko ကစားသမားပြောင်းလဲမှုများ; beta-နဲ့အတူ Endorphins, catecholamines, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တ္ထုများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း။ Apple က။ လူ့သိပ္ပံ။ 1999;18: 37-42 ။ Doi: 10.2114 / jpa.18.37 [PubMed]
Siever LJ, Buchsbaum က MS, နယူး AS, Spiegel-Cohen ကိုဂျေ, ဝေ T က, Hazlett EA ၏, Sevin အီး, Nunn M က, Mitropoulou V. d,lနှင့်အတူအကဲဖြတ်ထကြွလွယ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် -Fenfluaramine တုံ့ပြန်မှု [18F ကို] positron ထုတ်လွှတ် tomography fluorodeoxyglucose ။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;20: 413-423 ။ doi:10.1016/S0893-133X(98)00111-0 [PubMed]
Spanagel R ကို, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS လုပ်သူများတက်ကြွ endogenous opioid စနစ်များကိုအတိုက်အခံဟာ mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း modulate ။ proc ။ Natl Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1992;89: 2046-2050 ။ Doi: 10.1073 / pnas.89.6.2046 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tanabe J ကို, Thompson က L ကို, Claus အီး, Dalwani M က, ဟက် K ကို Banich MT Prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် nongambling ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုလျှော့ချထားသည်။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 2007;28: 1276-1286 ။ Doi: 10.1002 / hbm.20344 [PubMed]
V ကို V, Hassan K, Zurowski M, de Souza M, Thomsen T, Fox S, Lang AE, Miyasaki ဂျေပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ထပ်တလဲလဲနှင့်ဆုလာဘ်များရှာဖွေသည့်အပြုအမူများပျံ့နှံ့ခြင်း။ အာရုံကြော။ 2006;67: 1254-1257 ။ Doi: 10.1212 / 01.wnl.0000238503.20816.13 [PubMed]
Von V, Thomsen T, Miyasaki JM, de Souza M, Shafro A, Fox SH, Duff-Canning S, Lang AE, Zurowski အမ်အချက်များသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Arch ။ Neurol ။ 2007;64: 212-216 ။ Doi: 10.1001 / archneur.64.2.212 [PubMed]
Weintraub D, Siderow A, Potenza MN, Goveas J, Morales K, Duda J, Moberg P, Stern အမ်ဒိုopamine agonist အသုံးပြုမှုသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်သောရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Arch ။ Neurol ။ 2006;63: 969-973 ။ Doi: 10.1001 / archneur.63.7.969 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wexler, Gottschalk CH, Fulbright RK, Prohovnik ငါ Lacadie CM, Rounsaville BJ, ကိုကင်းတဏှာ၏ဂိုး JC Functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် BE ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 86-95 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.158.1.86 [PubMed]
et al Wrase J ကို။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တဏှာနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuroimage ။ 2007;35: 787-794 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2006.11.043 [PubMed]